कसरी सिंडिकेशनले वेब सामग्रीको प्रदर्शनमा प्रभाव पार्छ - Semalt जवाफ जान्छ
सिंडिकेटेड सामग्री कहिलेकाँही वेब सामग्री उद्योगमा वास्तवमा खराब प्रतिनिधित्व हुन्छ। दर्शकहरूको रणनीति प्राप्त गर्ने क्रममा, तपाइँ आशा गर्नुहुन्छ कि यसले थोरै ध्यान प्राप्त गर्नुपर्दछ। खैर, यो वास्तविकता मामला छैन।
हामी अगाडि बढ्न अघि, हामीले बुझ्नु पर्छ सामग्री सिन्डिकेशनको अर्थ के हो। सरल शब्दहरुमा, यो एक व्यापक दर्शकहरु सम्म पुग्न अन्य साइटहरुमा सामग्री पुनःप्रकाशित गर्ने एक विधि हो। सिंडिकेटेड सामग्री राखेर, तपाईं आफ्नो पहुँच र ब्रान्ड सचेतना बढाउनुहुन्छ र लिंकहरू निर्माण गर्दछ र तपाईंको मूल लेखमा अधिक ट्राफिक ड्राइभमा मद्दत गर्न सक्दछ।
सामग्री सिन्डिकेशन को बारे मा के महान छ?
हामी सबैलाई हाम्रो वेबसाइट वा अन्यमा सिंडिकेटेड सामग्रीको केही फारम चाहिन्छ। यो यसको लाभ अन्वेषण गर्न पागल हो।
उदाहरण को लागी, केहि सब भन्दा ठूला र प्रभावशाली साइटहरु वेब सुविधा सिंडिकेटेड सामग्री को। हामी वेबसाइटहरू जस्तै न्यू योर्क टाइम्स, हफिंगटन पोष्ट, र CNN लाई संदर्भ गर्दैछौं।
इन्टरनेट एउटा ठुलो र व्यस्त भवन हो जुन हडबेलको घडीमा वा टाइम्स स्क्वायरमा रेल स्टेसन जस्तो छ। यो विचार गर्न उचित छैन कि तपाइँको सामग्री तपाइँले चाहानुहुन्छ सबैमा पुग्छ किनभने तपाइँ तपाइँको वेबसाइट वा ब्लगमा प्रकाशित गर्नुभयो।
तपाइँको सामग्री सिंडिकेट गरेर, तपाइँ तपाइँको ब्लग पोष्ट वा वेब सामग्री (या त पूर्ण लेख वा यसको एक छोटो संस्करण) प्राप्त गर्नुहुन्छ दर्शकहरूको बिभिन्न संग्रहको अगाडि जसले अन्यथा तपाइँको वेबसाइट फेला पारेनन।
सामग्री सिन्डिकेशन एक धेरै किफायती (सामान्यतया कुनै लागतको छैन) तपाईंको सामग्रीलाई अधिक दर्शकहरूको स्क्रीनमा राख्ने तरीका हो। यो विज्ञापन तेस्रो पार्टी वेबसाइटको लागि पूर्ण नयाँ ब्लग पोस्ट लेख्नु भन्दा धेरै सस्तो र द्रुत पनि छ।
यो बिर्सनुहोस् मार्केटिंग सामग्री मार्केटिंगमा
ठिक छ, हामी सचेत छौं कि केही विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई चेतावनी दिएका छन् कि सिन्डिकेटिंग सामग्री खराब छ। उनीहरूले दावी गर्छन् कि यो वास्तवमै यत्ति खराब छ कि तपाई Google पेनल्टीले डुब्न सक्नुहुनेछ।
खैर, यो बकवास छ!
सत्य यो हो कि गुगलले तपाईंलाई सामग्री सिन्डिकेटेडको लागि दण्ड दिदैन। सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा, तपाईको कुनै पनि डुप्लिकेट सामग्री संस्करण खोज परिणामबाट फिल्टर गरीएको हुन सक्छ। सिन्डिकेशन रणनीति प्रयोग गर्दा, यो SERP मा पहिले देखा पर्दैन। यसको सट्टामा, यो सामग्री मार्केटिंग रणनीतिमा जोडको साथ छ बजार। किनभने तपाईले आफ्नो सामग्री व्यक्तिहरूको ठूलो समूहमा प्रदर्शन गर्ने एउटा तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई चिन्न सक्छन् र तपाईंको साइट भ्रमण गर्न सक्दछन् जब तिनीहरूलाई अधिक समान सामग्री चाहिन्छ, सिन्डिकेटेड द्वारा, तपाईंको सामग्री इन्टरनेटको वरिपरि छरिएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको वेबसाइटको नाम साथै लि links्कहरूको नोट लिन सक्दछन्। यस तरीकाले, तिनीहरू तपाईंको सामग्री भेट्न कहिल्यै आएनन् तपाईंको साइट, र अब तिनीहरू रोमाञ्चित छन्, तपाईंले आफ्नो वेब ट्राफिकमा वृद्धि देख्न थाल्नुहुन्छ।
आउनुहोस् हामी तपाईंलाई कसरी मार्केटिंग कार्य गर्दछौं:
चरण १: सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको लक्षित श्रोताको लागि तपाईंको ब्रान्डको बारेमा प्रेरणादायक वा अविस्मरणीय सामग्री प्रचार गर्नुहोस्।
चरण २: मानिसहरूले तपाईंको सामग्री/विज्ञापन देख्छन् तर यसतर्फ पक्षधर हुन सक्छन्।
चरण:: जब एक आवश्यकता आयो कि तपाईंको सामग्री मिले, तिनीहरूले तपाईंको सामग्री खोजी गर्दछ।
यद्यपि ब्लगरहरूले मुख्यतया सिन्डिकेशन प्रयोग गर्छन्, बाकस वेबसाइट बाहिरका केही मालिकहरूले पनि यसलाई आफ्नो ब्राण्ड र वेबसाइटको लोकप्रियता वा प्रख्यातता सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। यहाँ चार प्रकारका सामग्री सिन्डिकेशन छन् जुन तपाईलाई जान्नु आवश्यक पर्दछ।
१. तपाईंको ब्लगमा तेस्रो पार्टी सामग्री सिन्डिकेट गर्नुहोस्
एक प्रकाशकको ​​रूपमा, तपाईं अन्य वेबसाइटहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको वेबसाइटमा उनीहरूको सामग्री प्रयोग गर्न अनुमति माग्न सक्नुहुन्छ।
आदर्श रूपमा, तपाईंको ब्लगमा अधिकतम १०% सिन्डिकेटेड सामग्री हुनुपर्दछ। सिंडिकेटेड सामग्री मूल छैन भनेर विचार गर्दा, तपाईंले उपयोगी सामग्री प्रदर्शन गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको पाठकहरूलाई लाभदायक हुन्छ र तिनीहरूको समय मूल्यवान छ।
धेरै ब्लगहरू चलाउने वेब वा ब्रान्ड मालिकहरूको लागि, तपाईं कत्ति चुनौतीपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर पहिल्यै परिचित हुनुहुन्छ तपाईंको लागि पोस्टहरू लेख्दा प्रतिबद्ध रहनको लागि उत्तम लेखकहरू प्राप्त गर्न कत्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। धेरै जसो प्रायः ठूला लेखक वा प्रभावकर्ताहरूले कडा तालिका चलाउँछन् र तपाईको लागि ब्लग पोष्ट लेख्न खर्च गर्न धेरै खाली समय हुँदैन।
त्यसकारण, अधिक व्यावहारिक अनुरोध हो कि यस्ता प्रभावकर्ताहरू वा लेखकहरूलाई नयाँ लेख्न अनुरोध गर्नुको सट्टा उनीहरूको पहिले नै अवस्थित सामग्रीको एक प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुहोस्। यो छिटो, सस्तो, र कम तनावपूर्ण हुनुको साथै धेरै प्रभावकारीहरू यस्तो अनुरोधले बढी सम्मानित भएको महसुस गर्छन्।
के तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि यदि तपाईंले सिंडिकेट गरिएको सामग्री अझै पनी फिचर गर्नुपर्छ? आज हामीले धेरै वेबसाइटहरू फेला पारेका छौं जुन विगतमा केही आश्चर्यजनक विज्ञहरूको सिन्डिकेटेड सामग्री, लिंक्डइनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ वाइनर जस्तो मन पराइएका छन्; ब्लेक इरिइ,, GoDaddy का सीईओ; धर्मेश शाह, हबस्पटका संस्थापक; र जेफ हेडेन इंक। यसले उनीहरूको वेबसाइटलाई शीर्ष-खाच र उनीहरूको पाठकको लागि अत्यधिक प्रभावशाली सामग्री दिन्छ। साथै, तपाईं आफैलाई सिन्डिकेटेड विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ तेस्रो पार्टी साइटहरूमा अतिथि ब्लग पोष्टहरू योगदान दिने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, सधैं तपाइँको ब्लगमा ती पुन: प्रकाशित गर्न सम्झनुहोस्। SEO विशेषज्ञको रूपमा धेरै ग्राहकहरू उनीहरूको ब्लग पोष्टहरू लेख्न आउँदछन् र उनीहरूको अनुरोधमा हामी पहिले नै लेखिएको सामग्री पुनःप्रकाशित गर्न सक्दछौं जुन उनीहरूले छनौट गरेका थिए र उनीहरूको ब्लगमा चाहेका थिए। जब यो गरिरहेका हुन्छौं, हामी मूलमा हामीले लिंक दिन्छौं कि हामी मूल सामग्री चोरिएनौं भनेर। हामी अनुमति खोज्न जोड दिन्छौं किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ। हामी हाम्रो ग्राहकहरु को लागी जब लेख्न को लागी मूल र विशेष क्राफ्ट गरिएको सामग्री सिर्जना गर्न मनपराउँछौं। जे होस्, जब तिनीहरू सिंडिकेटेड सामग्रीका लागि अनुरोध गर्छन्, हामी तिनीहरूको अनुरोधहरू प्रदान गर्न बाध्य छौं।
सिंडिकेटेड सामग्रीको अर्को अचम्मको फाइदा यो हो कि यसले तत्काल तपाईंको सामग्रीको प्रकृति र कार्यक्षेत्रमा विविधता ल्याउँछ। यो तपाइँको वेबसाइट को लागी नयाँ र बहुमूल्य केहि ल्याउने एक अनूठा तरीका छ, र तपाइँको दर्शकहरु को लागी, अन्य पाठकहरु वेब मा कतै कतै आउन सक्छ, यो अझै तपाइँको साइट मा विशेष शक्ति बोक्छ।
२. अन्य वेबसाईटहरूमा तपाईंको सामग्री सिन्डिकेट गर्नुहोस्
जस्तो कि हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, सिन्डिकेट सामग्री सबैले प्रयोग गर्दछन्, र तपाईंको सामग्री सिन्डिकेट गर्नको लागि अर्को अचम्मको स्थान साझेदारी वेबसाइट हो।
उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को लागी र सामग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन सरकारी वेबसाइटहरु मा प्रकाशित भयो वा अन्य प्रमुख र भरोसायोग्य वेबसाइटहरुमा।
यो गर्दा, तपाईंसँग प्रायः दुई विकल्पहरू छन्:
सबै सिंडिकेटेड सामग्री: यस अवस्थामा, तपाइँले कुनै नयाँ सामग्री सिर्जना गर्नुहुने छैन, र तपाइँ तपाइँको सामग्री वा यसको विपरित प्रकाशन गर्नुहोस्।
सिन्डिकेटेड र मूल सामग्रीको मिक्स: यहाँ, तपाइँ तपाइँ आफ्नो साथीको वेबसाइट को लागी केहि भागहरु को लागी तपाइँको वेबसाइट मा नक्कल गर्न को लागी पहिचान गर्नुहोस्। जहाँसम्म, तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा तपाईंको अनौंठो सामग्री सिर्जना र प्रकाशित गर्नुहोस्। तपाईं दुबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने विभाजनमा सहमत हुनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ एक सम्झौता को लागी निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ एक महिना को लागी, तपाइँ तिनीहरुलाई सिन्डिकेटेड सामग्री दिनुहुन्छ; अर्को, यो एक मूल टुक्रा हो।
S. तिनीहरूका सामग्री सिन्डिकेट गर्ने साइटहरूमा सामग्री प्रकाशन
तपाइँको वेबसाइटमा नियमित योगदानकर्ता भएपछि, तपाइँ तिनीहरूको सामग्री सिन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि कुनै पत्रिका मा एक स्तम्भकार तपाइँको वेबसाइट को लागी लेख्छ, यसको मतलब यो हो कि तिनीहरु एक सामग्री सिन्डिकेटरमा प्रकाशित गर्दैछन्।
Self. स्वयं सेवा सिन्डिकेशन
तपाइँको सामग्री सिंडिकेट गर्न यो पनि सम्भव छ। तपाइँको वेबसाइट र तपाइँको ब्लग साइट को लागी केहि सही सेवा सिन्डिकेशन गर्न को लागी उत्तम शर्त सिर्जना गर्दछ। किनभने यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, उही कुरा दुई पटक लेख्नु भनेको संसाधनहरूको अपव्यय मान्न सकिन्छ, त्यसैले यसको सट्टामा, तपाईंले सिन्डिकेट गर्नुभयो।
सामग्री Repurposing? त्यहाँ कुनै उद्देश्य छैन!
सत्य यो हो कि एक वेबसाइट मालिकको रूपमा तपाईलाई सिन्डिकेटेड सामग्री मनपर्दैन, र त्यो ठीक छ; कसैले पनि तपाइँलाई एक हानि मा छैन भन्न छैन। धेरै पटक, हाम्रो ग्राहकहरु आफ्नो सामग्री मा १०० प्रतिशत मौलिकता चाहान्छन्। तर जब सर्त अनुकूल छैन, ग्राहकहरु सिन्डिकेट सामग्री को लागी अप्ट इन गर्न सक्दछन् र उनीहरूको दर्शकहरुलाई समान रुपमा अद्भुत सामग्री प्रदान गर्न सक्छन।
त्यसोभए यदि तपाईंको पहिलो ब्ल्याग चमकदार थियो र तपाईं अब आफ्नो वेबसाइटमा त्यो सामग्री प्रतिलिपि गर्न चाहानुहुन्छ भने किन? यसलाई सुरक्षित गर्नाले तपाईको तनाव बचाउनेछ। यदि तपाइँले अर्को साइटमा सामग्री प्रदर्शन गरेको कसरी देख्नुभयो र तपाइँ तपाइँको साइटमा उही कुरा चाहानुहुन्छ भने के हुन्छ? त्यो गर्नको लागि उत्तम तरिका भनेको सामग्रीलाई सिन्डिकेट गर्नु हो।
वा हुनसक्छ तपाईं इन्फोग्राफिक मन पराउनुहुन्छ जुन तपाईंले अर्को वेबसाइटमा देख्नुभयो, र तपाईंलाई यो आफ्नो वेबसाइटमा फेला पार्न मनपर्नेछ, तपाईं सिन्डिकेट गर्न आवश्यक सबै। आज, हामी यसलाई बेवास्ता नगरी धेरै सिन्डिकेसन पनि गर्छौं; निस्सन्देह तपाईंले कहींबाट उद्धरण वा इन्फोग्राफिक डिजाइन प्रतिलिपि गर्नुभयो।
नोट: सामग्री सिंडिकेट गर्दा तपाईं सावधान हुनुपर्छ किनभने श्रोताको प्रकार फरक हुन सक्छ। अब, यदि तपाइँ उत्तम सामग्री लिनुहुन्छ एक वेबसाइट बनाउनुहोस् र तपाइँमा राख्नुभयो भने, तपाइँले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँको दर्शकले मनपराउने कुरा केहि हो। यदि तपाईं होशियार हुनुहुन्न भने, तपाईं गलत सामग्री सिन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको वेबसाइटलाई बर्बाद गर्दछ।
यसका सबै फारामहरूमा सामग्री सिन्डिकेशन वेबसाइट मालिक र उनीहरूको दर्शकहरूको लागि अविश्वसनीय मूल्यको छ। तपाईंको सामग्री, साथै तपाईंको वेबसाइट मद्दत गर्नुहोस् सामग्री सिन्डिकेट गरी थप जानुहोस्। कम बजेटको साथ नयाँ वेबसाइटको रूपमा, यो पक्रिराख्न जीवन रेखा हुन सक्छ। जब परिप्रेक्ष्यमा राख्नुहुन्छ, तपाईं काममा नराखिकन गुणवत्ता सामग्री प्राप्त गर्नुहुन्छ। यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईंले स्पष्ट रूपमा भन्नु भयो कि गुगलको सुरक्षित पक्षमा तपाईं वेबसाईट सिन्डिकेट गरिरहनु भएको छ। Semalt विशेषज्ञहरु तपाईंलाई गल्तीहरू हटाउन मद्दत गर्दछ।